Caa’isha Romano: Asbabahan ayaan u qaatay Diinta Islaamka. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Caa’isha Romano: Asbabahan ayaan u qaatay Diinta Islaamka.
On Jul 8, 2020 1,637 0
Markii ugu horeysay Caa’isha Romano oo horey loo oran jiray Silvia Romano, ahaydna maxbuusad 18 bilood ku xirneyd Soomaaliya, markii dambena qaadaty diinta Islaamka ayaa bixisay waraysi dhinacyo badan taabanaya.
Waraysigan oo ay Caa’isha siisay wargeys lagu magacaabo Laluce oo kasoo baxa Talyaaniga, ayay kaga jawaabtay su’aalo dhowr ah oo ay kamid tahay sida ay ku qaadatay diinta Islaamka, aragtida bulshada Talyaaniga ay iyadu ka qabaan, sida ay usoo dhaweeyeen Muslimiinta Talyaaniga, waxay ku dooratay magaca Caa’isha iyo arimo kale.
Su’aasha ugu horeysa ee la waydiiyay Caa’isha waxay ahayd, kahor inta aadan ka bixin Talyaaniga, gacantana lagugu dhigin, maxay ahayd fikradda aad ka aaminsaneyd diinta?
Waxay sheegeysaa Caa’isha iney isku tilmaami karto ka hor inta aaney qaadan diinta Islaamka iney ahayd qof aan aaminsaneyn jiritaanka Allaah SWT, waxay sheegeysaa in marar badan ay hooyadeed waydiin jirtay waxay u dhacayaan dhibaatooyin badan, hadiiba uu Allaah jiro.
Waxay intaa ku dareysaa iney ahayd qof iska nool, ihtimaam gooni ahna siineynin diimaha kala duwan, nafsadeedana ku hagi jirtay oo keliya rabitaankeeda gaarka ah.
Mar wax laga waydiiyay Caa’isha in Talyaaniga ay kula kulantay dad Muslimiin ah ka hor inta aaney qaadan diinta Islaamka, waxay tilmaameysaa iney fikrad qaldan ka heystay diinta Islaamka iyo Muslimiinta, “ marka aan arko gabar xijaaban waxaan u fahmi jiray iney qasbantahay oo ay dhibaato dareemeyso” ayay hadalkeeda sii raacisay.
Silvia Romano, rag hubeysan ayaa kasoo afduubtay xeryaha Kakaama ee dalka Kenya, wuxuu wargeysku waydiinayaa in halkaas ay joogeen dad Muslimiin ah?
Waxay sheegeysaa Caa’isha in xeryahaas ay ku noolaayeen dad muslimiin ah, uuna ku yaalay masjid yar, iyadoo tilmaameysa in mid kamid ah raggii la shaqeynayay uu ahaa qof muslim ah, mararka qaarna ay xerada ku arki jirtay gabdho yar yar oo xijaaban, hase ahaate waxay tilmaameysaa in arimahaas oo idil aaney ku qancin xilligaas iney qaadato diinta Islaamka.
Iyadoo ka jawaabeysa su’aal ahayd goorme kugu horeysay oo aad billowday inaad aaminto Allaah oo aad u dhawaato ayay sheegeysaa Caa’isha, in markii gacnata lagu dhigay, oo ay lugeyneysay is waydiisay waxay dhibaatadan ugu dhaceyso, maxaa loo afduuban waayay gabdho kale oo adiga laguu bartilmaameedsaday, su’aalahaas iyo kuwa kale oo ay is waydiineysay ayaa ku dhaliay Caa’isha iney billowdo safar Iimaani ah oo kusoo idlaaday guul iyo qaadashada diinta Islaamka.
Iyadoo sii hadleysa waxay intaa ku dartay Caa’isha “ tallaabada labaad ee aan qaaday waxay timid markii aan ku jiray xabsiga, waxaan ka fakari jiray in Allaah uu ii ciqaabayo khalad aan sameeyay, maadaama aan horey u rumeynin isaga, kana fogaa inbadan. Arin kale ayaa ii baxday bishii January ee xigtay, anigoo ku jira xabsi ku yaala Somaaliya, waxay ahady xilli habeen ah, waan hurdayay, waxaan mar keliya maqlay duqeyn diyaaradeed oo aad u xoogan, ayaad ayaan isugu naxay, waxaan u qaatay inaan dhiman doono, kadibna waxaan billaabay inaan Allaah baryo, maxaa yeeley waxaan rabay inaan markale arko ehelkeyga, aad aya uga cabsanayay geerida, habeenkaas ay dhacday duqeynta waxay ahayd markii iigu horeysay oo aan Allaah magan galo” ayay tiri Caa’isha Romano oo horey loo oran jiray Silvia Romano.
Waxay sii tiri Caa’isha “ waxaan akhriyay Qur’aanka kariimka, mana ku arkin hadallo iska hor imaanaya, markiiba waxaan dareemay in Quraankan uu igu hayo kheyr badan, Qur’aan ma ahan hadalka Al-Shabaab, xaqiqidii waxaan dareemay in Quraanku ahaa mucjizo, waxaana sii watay safarkii ruuxiga ahaa, waxaana heley wacyi badan oo ku aadan jiritaanka Allaah, marlaxadaas waxaan dareemay in Allaah uu I tusay wado wanaagsan oo nolosha ah, aniguna aan xor u ahay inaan raaco iyo in kale” ayay tiri Caa’isha, iyadoo markalae cadeysay in ragga gacanta ku hayay ay ahaayeen kuwa naxriis badan. ay warbaahinta Talyaanigu waxay sheegeen in raggaas ay gacanta ugu jiray Caa’isha ka tirsanaayeen Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, balse weli ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Mujaahidiinta.
Mar la waydiiyay Caa’isha aayadda saameyn gaar ah ku yeelatay nolosheeda, ay ahayd aayadda 70-aad ee suuratul Anfaal..
Waxay kaloo tilmaamtay Caa’isha in magacan ay jeclaatay iney la baxdo markii habeen habeennada kamid ah ay ku riyootay iyadoo jogta Talyaaniga, kursiga tareenkana loogu qoray magaca Caa’isha.
Xaaladda ay hadda ku nooshahay waxay tilmaamtay iney tahay mid wanaagsan, aad uga duwantahay sidii hore, ixtiraamto waalideenteeda, muslimiinta Talyaanigana ay u muujiyeen soo dhaweyn iyo garab istaag ballaaran.
Garab istaaga ay Caa’isha ka heshey muslimiinta Talyaaniga waxaa tusaale loogu soo qaadan karaa dhacdo ay la kulantay Ca’isha daqiiqado kahor inta aan laga qaadin waraysiga, xilligaas oo iyadoo laamiga socotay ka hor timid haweeney masaari ah, taasoo I waydiisay “Silvia miya? Haa markii ay tiri ayayna laabta gelisay, iyadoo weliba ilmayneysa.
Inkastoo dadka cunsuriyiinta ah ee ku nool Talyainga ay halis amni geliyeen Caa’isha, lagana baqayay iney beegsadaan, hadana waxay Caa’isha Romano sheegeysaa iney jirin wax wal wal ah oo ay dareemeyso, ayna aaminsantahay in Allaah SWT uu ilaalinayo.